Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo goordhaw la doortay « AYAAMO TV
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo goordhaw la doortay by Maamule b 1 of 1
580 Views Date March 3rd, 2014 time 4:55 pm
Wararka aan ka heleyno Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya goordhaw halkaasi lagu doortay .
Doorashada oo maanta ka dhacday Xarunta ADC ee magaalada Baydhabo, waxaa Xilka Madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu tartamayay ilaa 6-Musharax oo isku soo taagay qabashada Xilkaasi
Madoobe Nuunow Maxamed oo ah Siyaasi si weyn loo yaqaan Horeyna uga soo mid noqday Dowladihii KMG ee Soomaaliya ayaa loo doortay in uu noqdo Madaxweynaha Maamul Goboleedka Murunka uu ka taagan yahay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweynaha Cusub ee Maamulka ka kooban Lixda Gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Madoobe Nuunow Maxamed ayaa helay codad gaaraya ilaa 44-cod oo kamid ah Codadka ay dhiibteen 73-da Xubnood ee Golaha Guurtida ee wax dooraneysay.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusugnaa madasha ay doorashada ka dhacday , waxaana maanta Magaalada Baydhabo si weyn looga dareemayaa doorashada Hogaanka Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo waxaa sidoo kale kasocda Shir kale oo lagu dhisaho Maamul Goboleed la magac baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban ilaa Sadax Gobol kaa oo isna la filayo in dhawaan ogaan lagu doorto.
Wasaarada Arimaha Gudaha Xukuumada Soomaaliya ayaa war maanta ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marnaba aysan aqoonsaneyn waxii natiijo ah ee kasoo baxa Shirarka isdiidan ee kasocda Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.